StatusbarVolume inotibvumidza kudzora vhoriyamu ye iPhone yedu kubva pachiratidziro | IPhone nhau
Parizvino muCydia tinogona kuwana nhamba yakakura yetweaks iyo inotibvumidza isu kugadzirisa mamiriro echimiro ye iPhone yedu. Pakati pezvakakurumbira isu tinowana Zeppelin iyo inotibvumidza isu kuti tichinje logo yeanoshanda, StatusHUD iyo inotiratidza iro vhoriyamu nhanho, Alkaline kuchinja dhizaini yebhatiri, PlayMe2 inotiratidza rwiyo nemunyanzvi mune status bar, StatusBarWeather iyo inotiratidza ruzivo nezve mamiriro ekunze…. uye saka tinogona kuva nguva yakanaka.
Iyo yemamiriro bar yakagara yave imwe yeva tweak vanogadzira 'epamberi pekutanga. Nhasi tichataura nezve tweak yakafanana neStatusHUD, iyo inotitaridza iro rekudzoresa vhoriyamu mubato remamiriro, asi kusiyana neizvi, StatusbarVolumen inotibvumidza kuti tiigadzirise nekutsvedza munwe wedu pachiratidziri.
Zvichida nguva pfupi yadarika, YouTube yakagadzirisa yavo app nekugadzirisa iyo nzira yekudzoresa vhoriyamu inoratidzwa pese pavanoichinja muapp mavo. Panzvimbo pekuratidzira chinongedzo chinotora chikamu chakakura chechidzitiro uye chisatibvumidze kuti tione vhidhiyo, YouTube inotiratidza tambo iri munzvimbo yemamiriro isingakanganise kuratidzwa.
StatusbarVolumen inotiratidza iwo akafanana interface, kumusoro kwechigadzirwa, asi zvakare inokutendera iwe kuti uchinje vhoriyamu nekutsvedza chigunwe chako pane iyo vhoriyamu kutongaNenzira iyi, isu tinofanirwa kungodzvanya kamwe chete pabhatani mabhatani kuti iyo nyowani nyowani ioneke uye isu tinokwanisa kushandura vhoriyamu kune kwedu kufarira.
Kuva tweak izvo inosangana muhurongwa inowanikwa mune zvese zvinoshandiswa. Kuti rishande nemazvo, tinofanirwa kudzora vhoriyamu yedhizaini tichishandisa mabhatani akagadzirirwa izvi, kuburikidza nechikamu cheRuzha mukati meMagadziriso. StatusbarVolume inowanikwa mahara pane iyo BigBoss repo uye inotsigirwa senge yeIOS 8.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » StatusbarVolume inotibvumidza kudzora vhoriyamu ye iPhone yedu kubva pachiratidziri
Vamiriri veEurozone vanonyara kubva kuApple mutero gakava